Fandroahana Georgians avy any Rosia - Mpisolovava rosiana an-Tserasera - Ny mpisolovava rehetra ao Rosia! Ny lehibe indrindra mpisolovava vavahadin-tserasera.
Fandroahana Georgians avy any Rosia - Mpisolovava rosiana an-Tserasera
Roa Georgians maty tany Mosko, raha mbola ao am-ponja
Ny taona fandroahana Georgians avy any Rosia dia manondro ny fahafatesana, ny tsy ara-dalàna ireo fisamborana, ny fandroahana ary amin'ny ankapobeny ny fampijaliana ny maro arivo foko Georgians ny governemanta rosiana nandritra ny taona zeorziana-rosiana mpitsikilo adihevitra Ny rosiana amin'ny fomba ofisialy ny toerana dia Georgians amin'ny fanontaniana nandika ny rosiana ny lalàna momba ny fifindra-monina ary ny fandroahana sy ny fitsaboana any am-ponja fotsiny fitsipika fampiharana ny lalàna.  Ny governemanta zeorziana fitenenany fa Rosia ny manao hetsika manohitra ny foko Georgians, anisan'izany araka ny tokony ho voarakitra ny olona tsirairay, dia ny asa ara-politika famaizana noho ny fisamborana ny rosiana mpitsikilo ary tantamount 'pahalemem-panahy ny endriky ny fanadiovana ara-poko'.  zeorziana milaza fa ireo nanohana ny"Human Rights Watch", izay voarakitra 'ny governemanta rosiana tsy ara-drariny sy tsy ara-dalàna ny fitazonana sy ny fandroahana Georgians, anisan'izany ny maro izay ara-dalàna nipetraka sy niasa tany Rosia. ' Georgia taty aoriana nanenjika ny Governemanta rosiana teny amin'ny Fitsarana Eoropeana momba ny Zon'olombelona (ECHR). Amin'ny, ny Eoropeana ny Fitsarana ao Zeorzia ny famindram-po, pamaranana fa Rosia ny hetsika tamin'ny taona nandika ny Fifanarahana Eoropeanina momba ny Zon'olombelona. Ny didim-pitsarana no nanome ny governemanta rosiana ny fe-potoana volana ka mety hifampiraharaha amin'ny Zeorzia ny marina ampy fanononana tsy ampy ny onitra ho fahavoazana manjò ny olom-pirenena zeorziana sy ny fianakaviany ny taona Georgia fomba ofisialy nangataka mihoatra ny tapitrisa Euros ny onitra ho an'ny tra-boina.  Amin'ny taona, ny Fitsarana Eoropeana nahazo Zeorzia miaraka amin'ny tapitrisa Euro manimba ny onitra.
 Ny spree ny fisamborana sy an-katerena ny foko Georgians ao Rosia dia mihena amin'ny alalan'ny filazana am-pasana ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona.
Tengiz Trogonids, taona, mpiasa mpifindra monina no maty ny matsilo asma ao amin'ny seranam-piaramanidin'i Moskoa izy dia miandry ny fandroahana.  Araka ny zeorziana Masoivoho ao Mosko, Trogonids dia nandà ny fitsaboana ny saina nandritra ny dimy andro am-ponja na dia eo aza ny fangatahana mba jereo ny dokotera. Ny manampahefana rosiana milaza ny zava-drehetra izay azo atao, dia atao ho an'ny Trogonids.  an'i manana Jabaliya, zeorziana-pirenena miaina ao Rosia nanomboka ny ady tany Abkhazia, nodimandry noho ny aretim-po ao Moskoa raha mbola tao am-ponja nanaraka azy am-ponja noho ny filazana fa tsy manana na inona na inona maha-na fifindra-monina taratasy. Tamin'izany fotoana izany, ny pasipaorony dia eo am-piandrasana ny fanavaozana amin'ny zeorziana mpanao fihetsiketsehana ao Moskoa.  Tamin'ny oktobra, ny Human Rights Watch namoaka tatitra momba ny zeorziana mpifindra-monina ao Rosia, izay voarakitra 'ny governemanta rosiana tsy ara-drariny sy tsy ara-dalàna ny fitazonana sy ny fandroahana Georgians, anisan'izany ny maro izay ara-dalàna nipetraka sy niasa tany Rosia,' ary fa manaraka ny tsy mitsaha-mitombo ara-politika ny fihenjanana eo amin'i Rosia sy Georgia, 'ny manampahefana rosiana nanomboka ny fihanaky ny famoretana ny ara-poko Georgians, teratany zeorziana, sy zeorziana-panjakana na zeorziana-themed orinasa sy fikambanana.
Manam-pahefana ambony hoharatsiratsina Georgians am-pahibemaso ao amin'ny gazetim-TV, ary ny maro ao Rosia ny governemanta-namana TV sy ny haino aman-jery hafa nanaraka.
Mpitandro filaminana sy ny manam-pahefana hafa nandà ny zo fototra ho an'ny maro amin'ireo voasambotra' ary nasiako marika fa 'ny governemanta rosiana ny fampielezan-kevitra manohitra ny Georgians nitranga tao amin'ny vanim-tsosialin'ny ny fanavakavahana sy ny fankahalana vahiny any Rosia. ' ny volana janoary ny tatitra, ny Freedom House, nanatsoaka hevitra fa ny manampahefana rosiana 'nandefitra sy namporisika ny fampijaliana ny mpifindra monina avy any Georgia sy ny Kaokazy hafa firenena.
' Georgia nanenjika Rosiana teny amin'ny Fitsarana Eoropeana momba ny Zon'olombelona (ECHR), mitaky Moskoa reimbursed pecuniary sy ny tsy pecuniary fahavoazana.
Tamin'ny jolay taona, ny ECHR nanambara fa tsy hita ao Zeorzia fitarainana manohitra Rosia eo an-katerena ekena ho an'ny fandrenesana, ary hanafaka ny fitsarana 'amin'ny daty any aoriana any'.  ny taona, ny Fitsarana Eoropeana farany nanjaka fa Rosia ny asa ny taona dia fanitsakitsahana ny Fitsarana Eoropeanina momba ny Zon'olombelona sy ny nanome Moskoa volana mba hifampiraharaha amin'ny Zeorzia ny marina ampy fanononana tsy ampy ny onitra ho fahavoazana manjò ny olom-pirenena zeorziana ao amin'ny Georgia fomba ofisialy nangataka mihoatra ny tapitrisa Euros ho an'ny niharam-boina.  ny volana janoary taona, ny Fitsarana Eoropeana misahana ny Zon'olombelona (ECHR) namoaka didy fa toy ny vokatry ny didim-pitsarana, ary amin ao Zeorzia fampiharana ny fahavoazana onitra, Rosia dia tsy maintsy mandoa vola tapitrisa Euros any Zeorzia.
Za prodajo Nepremičnin v Rusiji? Ali Ste Nori? - New York Times